Uyilo lweMveliso kunye nePrototyping-Dongguan Chengda ngerabha kunye nePlastiki yeTekhnoloji Co., Ltd.
I-Dongguan Chengda Irabha kunye nePlastiki yeTekhnoloji yimveliso yesiko lesilikhi kunye nemveliso zerabha, egxile ekwenzeni iimveliso ze-silicone kunye neemveliso zerabha.
Uyilo lweMveliso Inkonzo:
Iqela lethu lobunjineli linamava atyebileyo kunye namava okuvelisa ukuzisa izimvo zakho ziyinyani, lisebenzise ulwazi lwethu kunye namava ukunciphisa ixesha lakho lokuthengisa. Sinokuyila imveliso ngokombono wakho. Ukuba unikezela isampuli, sinokuskena kwi-3D isampulu kwaye ufumane uyilo lwe-3D lwemveliso, emva koko sinokuguqula uyilo ngokusekwe kumbono wakho.
Inkonzo yePrototype ekhawulezayo:
Kwakhona, xa ufuna ukubona kwaye uzive uyilo lwamalungu erabha yesiko ngaphambi kokuba uqalise ukungunda, i-Chengda irabha kunye neplastiki zinokuvelisa iiprototypes ezikhawulezayo kuwe, sinokuprinta isampulu ngokuprinta nge-3D okanye sinokwenza isampula yokubumba kunye nokwenza iisampulu wena.
Iqela le-Chengda ngerabha kunye nePlastiki lithengisa kakhulu kwaye kulula ukunxibelelana, umntu wethu othengisayo angathatha iqela lobunjineli ukuqala unxibelelwano olunzulu kunye nawe, kubandakanya ulwakhiwo, ukunyamezelana, izinto, umbala, umsebenzi kunye nokusebenza kwendleko, ukukunceda ufumane olona lukhulu isisombululo iiprojekthi zakho abicah siko okanye iiprojekthi irabha siko.